Famatsiana herinaratra: 2 % monja amin’ny rano no voatrandraka | NewsMada
Anisan’ny tanjona amin’ny politika momba ny angovo azo havaozina ny hamatsiana herinaratra ny any ambanivohitra, be mponina sy miparitaka amina tanàna maro. Raha ny salanisa, mponina miisa 41 /km2 any ambanivohitra tsy manana herinaratra. Noho ny fahefa-mividy ambany, lafo loatra tsy mahatakatra ny angovo vokarin’ny Jirama amin’ny solika ny faritra maro, sady tsy tongan’ny famatsiana. Ny taona 2017, namoahana lalàna vaovao ny fanitarana sy fanamoràna ny fitrandrahana herinaratra, tohanan’ny fiaraha-miasa any ivelany, fiaraha-miasan’ny fanjakana sy ny tsy miankina, na samy tsy miankina, niantsoana ireo mpampiasa vola ho amin’ny famokarana herinaratra azo havaozina.
Tsy tratra ny tanjona, ny zava-misy ankehitriny 2% monja amin’ny rano no voatrandraka amina toby 660 hita manerana ny Nosy. 350 amin’ireo toby ireo no afahana mamokatra 1 Mw hatramin’ny 20 Mw, tokony ho mora vidy zakan’ny any ambanivohitra. Vao mainka sarotra ny hahatongavana amin’izany, ankehitriny, satria mihena ny rano misy amin’ireo toby ireo noho ny fivadihan’ny toetr’andro. Nefa ny tanjona napetraka amin’ny politika momba ny angovo, 75 % alaina avy amin’ny rano alohan’ny 2030.
Mahazo herin’ny masoandro indray ny faritra rehetra manerana ny Nosy, 2800 ora isan-taona, ahazoana angovo 1600 Kwh, saingy tsy ampy 5 % ny voatrandraka amin’izany. Mbola tsy asiana resaka firy ny avy amin’ny rivotra nefa manana ny lafy valon’ny Nosy mandavan-taona.
Nahena 50 % ny hetra sy haba
Nofaritana tamin’ny tetibolam-panjakana 2017 ny fampiasam-bola amin’ny sehatry ny angovo azo havaozina. Nahena ho 50 % ny hetra sy haba alaina amin’ireo kojakoja samihafa entin’ny mpampiasa vola, iaraha-miasa amin’ny EDBM*. Na eo aza ireo orinasa tsy miankina maromaro manampy ny Jirama, tsy ampy betsaka ny fampiasam-bola, vitsy ny fitaovana, tsy miitatra ny tetikasa, tsy mandeha ny fitsinjarana, tsy hita firy ny fikojakojana. Miankina betsaka amin’ny herinaratra anefa ny sehatry ny fizahantany, ny fambolena, ny fifandraisan-davitra, ny asa vaventy, sns. Antony mbola mampihisatra ny toekarena eto an-toerana.
Légende : Toby Sahanivotry mamokatra 16,5 Mw, any Vakinankaratra.
EDBM*: Economic development board of Madagascar